Ngingayibuyisela kanjani imilayezo yeTelegram - VidaBytes | I-LifeBytes
U-Iris Gamen | 13/06/2022 20:17 | Aplicaciones
Ngiqinisekile kuke kwenzeka kuwe ushintshe ifoni yakho, awuzange ube nesipele futhi awulahlekelwanga nje kuphela izingxoxo zezingxoxo zeTelegramu, kodwa nawo wonke amafayela. wahlanganyela kuzo. Ezikhathini eziningi, asikuniki ukubaluleka okukhulu, kodwa uma lezi zingxoxo zihlanganisa idatha yomsebenzi noma yomuntu siqu noma amadokhumenti, izinto ziba nzima.
Ungakhathazeki, sikhona ukuze sikusize kule nkinga. Sizokunikeza uchungechunge lwezinyathelo futhi amathiphu ongawalandela ukuze ukwazi ukubuyisela imilayezo ku-akhawunti yakho ye-Telegram, kanye nedatha ebalulekile namadokhumenti.
Uma, ngakolunye uhlangothi, kunguwena obususa izingxoxo ngazinye ohlelweni ngalunye futhi manje usufuna ukuzibuyisela, uzokwazi ukwenza kanjalo. I-Telegraph, ikunikeza ithuba lokususa unomphela imiyalezo noma umlando wokuxoxa ngaphandle kokushiya umkhondo. Ngisho nale milayezo esikhethe ukuyisusa uzokwazi ukuyibuyisela. Hlala sizokuchazela ukuthi kanjani.
1 Luyini uhlelo lweTelegram?
2 Ungayithola kanjani kabusha imilayezo yeTelegram
2.1 hlehlisa inkinobho
2.2 Imilayezo ilondolozwe kuTelegram
2.3 Hlola inqolobane yocingo lwakho
3 Uyenza kanjani isipele iTelegram
Luyini uhlelo lweTelegram?
I-Telegram, iyi-a uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo esheshayo olutholakala kumadivayisi ahlukahlukene njengeWindows, MacOs neLinux, ngaphandle kokukhohlwa i-Android ne-IOS. Itholakala cishe kuwo wonke amathuluzi esiwasebenzisa osukwini lwethu nosuku. Kukhona abaqhathanisa lolu hlelo lokusebenza ne-WhatsApp, ngenxa yokufana kwayo nokuthi banenhloso efanayo.
Okuhlukanisa omunye komunye ukuthi iTelegram ayidingi umakhalekhukhwini ukuze isebenze. Ngenxa yalokhu, ubumfihlo babo bonke abasebenzisi bayo bulawulwa impela. Futhi, iphuzu elihle ukuthi imininingwane okwabelwana ngayo ezingxoxweni igcinwa kumaseva eTelegramu futhi hhayi kudivayisi.
Ungayithola kanjani kabusha imilayezo yeTelegram
Kulesi sigaba ozithola ukuso, uzokwazi ukuthola izinqubo ezahlukene ozokwazi ngazo buyisela izingxoxo namafayela eTelegramu asusiwe noma alahlekile.
Uhlelo lokusebenza lweTelegram, ikuvumela ukuthi uhlehlise lokho okususile, ngenhloso noma ngokungenhloso. Khumbula ukuthi kufanele wenze le nqubo ngesikhathi esifushane ngangokunokwenzeka uma ususe imilayezo engxoxweni.
Uma wenza isinqumo sokususa ingxoxo ngokuphelele, uzobona a inketho enethuba lokuhlehlisa leso senzo imizuzwana embalwa. Uma ucindezela kuleyo nkinobho yokuhlehlisa, uzokwazi ukubuyisela yonke into ngemizuzwana, imilayezo namafayela ngaphandle kwenkinga.
Ungenza le nqubo kuphela kuleso sikhala sesikhathi lapho uhlelo lokusebenza lubonisa ukuthi kungenzeka ukuthi uthe ngaphansi kwesikrini, unesikhathi esilinganiselwe esingamasekhondi angu-5.
Esimeni lapho ususa umlayezo engxoxweni eyodwa, uzoba nesixazululo esincane. Kunoma yikuphi, uma usukulungele ukususa okuthile kuhlelo lokusebenza, lokhu izokubuza izikhathi ezimbalwa ukuthi uyafuna ngempela yini ukususa okuqukethwe okunjalo, uma kunjalo, kufanele nje wamukele futhi ulinde ukuthi isuswe.
Imilayezo ilondolozwe kuTelegram
Impela, ezikhathini ezingaphezu kwesisodwa ulondoloze imilayezo ngaphandle kokuqaphela. Lolu hlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo, Inefolda eyakhelwe ngaphakathi lapho kugcinwa khona imilayezo oyigcinile futhi ongayisebenzisa noma nini.
Abasebenzisi abaningi beTelegramu abazi ngale folda eyimfihlo futhi bakholelwa ukuthi balahlekelwe yimiyalezo yabo. Asisekho isidingo sokukhathazeka, leyo miyalezo ayizange ilahleke, kodwa zigcinwe futhi uzokwazi ukuzithola, njengamanje siyakutshela ukuthi ungawabuyisa kanjani.
Ukuze ufinyelele kuzo, kufanele uvule uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo. Okulandelayo, iya phezulu kwesokunxele kwesikrini, lapho uzofaka khona iwindi lephrofayela yakho. Bese ukhetha igama lakho nenombolo, bona igama lakho lomsebenzisi kuhlelo lokusebenza. Kwe isithonjana sengilazi esikhulisayo esivela esikrinini sengxoxo, bhala igama lomsebenzisi bese ngokuzenzakalelayo, iTelegram, ikubonise ifolda yemiyalezo egciniwe.
Hlola inqolobane yocingo lwakho
Esimeni lapho ulahlekelwe noma ususa ifayela, kungaba i-multimedia noma umbhalo, futhi ufuna ukulibuyisa, kufanele ulandele izinyathelo ezilandelayo. Okokuqala, uzodinga ukuya kumphathi wefayela wedivayisi yakho yeselula. Bheka ifolda ngaphansi kwegama ledivayisi yakho, uma kuyi-Android, ifolda izoba negama elifanayo.
Uma isitholakele, yikhethe, yifinyelele kanye nokuqukethwe kwayo. Ngaphakathi, ungathola amafolda ahlukene lapho kugcinwa khona yonke inqolobane yezinhlelo zokusebenza ezifakwe kumadivayisi akho. Thola ifolda ngaphansi kwegama leTelegramu, bese ufinyelela wonke amafayela abiwe kuhlelo lokusebenza futhi uthole lelo olisuse ngephutha.
Uyenza kanjani isipele iTelegram
Le nqubo yokulondoloza ihluke ngandlela thile kulokho esijwayele ukukubona ku-WhatsApp. Uhlelo lokusebenza lweTelegramu lune-a ithuluzi elizosivumela ukuthi sigcine yonke imininingwane yezingxoxo zethu kukhompyutha yethu yomuntu siqu.
Ukuze ukwazi ukuthekelisa izingxoxo esizivule kuTelegramu ku-PC, into yokuqala okufanele uyazi ukuthi kufanele ube nazo. ifake uhlelo kudeskithophu yedivayisi. Uma usuyifakile, usunayo kuphela ngena ngenombolo yakho yeselula bese ufaka ikhodi ethunyelwe kwenye yamadivayisi akho, ngokuvamile iselula.
Uma uvula uhlelo lokusebenza kukhompuyutha yakho, uzochofoza imenyu evela engxenyeni engenhla kwesokunxele yesikrini, eyaziwa ngokuthi imenyu ye-hamburger. Uma usuchofoziwe, imenyu iyavezwa futhi uzobheka inketho yezilungiselelo.
Uma uchofoza izilungiselelo, iwindi le-pop-up liyavela elinezinketho ezahlukene. Phakathi kwazo zonke lezo zinketho, kufanele ukhethe ethuthukisiwe. Futhi, kuzovuleka isikrini esisha lapho kufanele ukhethe khona inketho ethi "Khipha idatha kuTelegramu", ngaphakathi kwesigaba "Idatha nokugcina".
Njengoba kwenzeka kwesinye isikhathi lapho wenza ikhophi yasenqolobaneni, Kufanele unake zonke izinketho owethulwa kuzo., njengoba kuye ngokuthi ukhetha eyodwa noma enye, le khophi izophelela kakhulu noma kancane.
Njengoba ubona esithombeni, kunamathuba ahlukene okulondoloza, izingxoxo eziyimfihlo kuphela noma ezomuntu siqu, amaqembu angasese noma asesidlangalaleni, osayizi bamafayela, njll. Uma usunakho konke futhi ikhophi isiqediwe, wonke amafayela azogcinwa kufolda yokulanda ngaphansi kwegama elithi “Telegram Desktop”.
Khumbula ukuthi uma singekho isipele, ngeke ukwazi ukubuyisela izingxoxo, noma imilayezo esusiwe noma amafayela e-multimedia. Sithemba ukuthi lawa macebiso ayisisekelo okuthi ungayibuyisela kanjani imilayezo yeTelegramu azokusiza. Uma noma isiphi isigameko noma isiphi isigameko sokwelashwa senzeke kuwe, usuvele wazi ukuthi kufanele wenze kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: LifeBytes » Aplicaciones » Ngingayibuyisela kanjani imilayezo yeTelegram